Safarka Xalaal ee Qatar - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Safarka Qatar Xalaal
Xaaladda Covid-19 ee Qatar
Qadar (Carabi: قطر; waxaa loogu dhawaaqaa) kut-ar) waa dowlad carbeed oo hodan ah oo qabsata dhul yar oo ka mid ah kuna fidsan gacanka Beershiya ilaa woqooyiga Sacuudi Carabiya, bariga Baxrayn iyo galbeedka Imaaraadka Carabta.
Qaar badan baa yimaadda Bariga Dhexe iyagoo raadinaya qarsoodiga, nolosha soo jireenka ah ee Reer Baadiyaha, iyagoo ku meeraysanaya lamadegaanka iyagoo hantidooda ku haysta dhabarka awrta. In kasta oo dhaqanku weli yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah akhlaaqda Qadar, haddana waddanku si wanaagsan oo run ah ayuu ugu soo gudbay qarnigii labaatanaad oo ay la socdaan daaraha dhaadheer ee muraayadaha Doha, waax ganacsi oo aad u koraysa iyo meel cusub oo laga helay diblomaasiyadda adduunka
Doha - caasimada
Al Khor - waa magaalo woqooyi oo ay ku noolyihiin qiyaastii 36,000, kuna dhow Ras Laffan LNG (gaaska dabiiciga ee liquified)
Al Shamal - maqaalkani wuxuu daboolayaa aagga ballaaran ee degmada woqooyiga ee Madinat ash Shamal
Mesaieed - magaalo warshadeed oo ku taal koonfurta Doha, iyo 25 km koonfur ka jirta Wakra, oo leh hawlo madadaalo xeebta, oo ay ku jiraan ciidda ciidda ee Khor Al Udeid (Badda Gudaha)
Ummu Salal Maxamed
Al Shamal - burburkii magaalo cidla ah iyo qalcad uu dhisay sanadkii 1938-kii oo uu dhisay Sheikh Abdu'llah bin Qaasim Al-Thani
Qatar waxay leedahay kaydka gaaska dabiiciga ee saddexaad ee ugu weyn adduunka, waxaana ka dambeeya oo keliya Ruushka iyo Iiraan. Keydkeeda saliida waxay la mid tahay cabirka kuwa Mareykanka Mareykanka laakiin wey sii dheeraan doontaa maxaa yeelay heerarka wax soo saarkiisu waa kaliya lix meelood meel heerka dalkaas. Xisaabaadka badankood dadkoodu waa kuwa ugu taajirsan adduunka.
Sababtoo ah shabakadaha dayax gacmeedkooda TV-ga Al Jazeera waxay ku baahinayaan adduunka oo dhan Carabi iyo Ingiriis, Qatar waxay si weyn saameyn ugu leedahay gobol kale oo muxaafid ah.
Waxaa jira caddeyn muujineysa in jasiiradda Qadar ay ku noolaayeen reer baadiyaha iyo reer Kancaan intii ka horreysay 4000 BCE. In kasta oo matxafku yaallo noocyo kala duwan oo farshaxan ah oo ay ku jiraan waranlo iyo qaybo ka mid ah dhoobada, haddana wax yar ayaa ka dhiman dhismayaasha laga yaabo inay mar uun jireen. Qaab dhismeedka dhagaxa weyn ee Al-Jassassiya ee waqooyiga Doha ayaa xoogaa fikrad ah ka bixinaya sida qabaa'illadani ugu noolaan karaan. Dhawaanahan, dhismayaasha dhagaxa ciida ah iyo masaajidada qaarkood ayaa la helay, taas oo xiisaysa xiisaha arkeolojiyada sida ay u raadinayaan inay ogaadaan waxa weli ku hoos jira ciidda.
Ka soo bixitaanka taariikh qadiim ah, Qadar waxaa ku xoog badnaa boqortooyooyin kala duwan oo reer Galbeed iyo reer Bari ah. Ormus wuxuu gacanka u isticmaalay inuu noqdo boosteejo ganacsi iyo deked militari, ilaa Boortaqiisku awood u yeesho inuu ku sii dheereysto xukunkiisa gobolka. Bahrain oo deris ahayd ayaa aakhirkii ku darsantay gacanka, illaa dhaqdhaqaaqyadii fallaagada iyo faragelintii Ingiriisku ay markale Qadar ka madax-bannaanaadeen. Cadaadis markii la saaray, Qatar waxay ka mid noqotay Boqortooyadii Cusmaaniyiinta 1871 ka hor intaanay noqon maxmiyad Ingiriis xiritaankii Dagaalkii Koowaad ee Dunida Kadib muddo kooban oo ay qayb ka ahayd Isutagga Imaaraatka Carabta, madaxbanaanida waxaa looga dhawaaqay Ingiriiska 1971.
Tan iyo waagaas, Qatar waxay isu bedeshay mid liidata oo ka mid ah maxmiyadda Ingiriiska oo lagu xusay inta badan warshaddeeda kalluumeysiga iyadoo loo beddelay waddan madaxbannaan oo leh dakhli badan oo saliid iyo gaas dabiici ah, taas oo u oggolaanaysa Qatar inay yeelato GDP-ga ugu sarreeya ee qof walba oo adduunka ah. Qatar waxay si qoto dheer ugu lug yeelatay arimaha aduunka hoostiisa qoyska boqortooyada, iyadoo bixisa taageero howlgalada nabad ilaalinta iyo dagaalada ay qaramada midoobay u xilsaartay sida kii khaliijka 1991. Qatar sidoo kale waxay marti galisaa shirarka kala duwan ee aduunka, oo ay kujiraan kuwa Ururka ganacsiga aduunka, the UN Cahdiga Cimilada iyo hay'ado dhexdhexaadin oo kala duwan. Waxay ku soo booday masraxa adduunka iyadoo horumarisay shabakadda wararka ee caanka ah ee Al Jazeera iyo ballaarinta Qatar Airways oo la gaarsiiyey inta badan qaaradaha adduunka, waxayna si xawli ah uga helaysaa xiisaha shisheeyaha iyada oo isu diyaarineysa martigelinta Koobka Adduunka ee 2022 FIFA ka dib markii ay horeyba u haysatay Aasiyaanka. Ciyaaraha 2006.
Qadar waa jasiirad ubucda gacanka Beershiya. Dalka intiisa badani waxay ka kooban tahay dhul madhalays ah oo hooseeya oo lagu daboolay dunyo. Koonfurta-bari ee Qatar waxaa ku yaal Khor al Adaid, oo ah aag leh carro ciid ah iyo marin laga soo galo Gacanka Beershiya.
Qatar waa boqortooyo buuxda oo uu madax u yahay amiirka, kana soo jeeda qoyska Al-Thani. In kasta oo waddanku si deg deg ah u casriyeeyay hoggaanka amiirkii hore Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, su'aalaha ayaa weli ku saabsan sida loola dhaqmayo shaqaalaha muhaajiriinta ah ee ka yimid qeybaha kale ee Aasiya, taas oo kooxo badan oo xuquuqda aadanaha ay ku tilmaameen mid dhiig-miirato ah iyo addoon la mid ah. Sida ka jirta inta badan wadamada kale ee gobolka, baaqyada dib u habeyn iyo dimoqraadiyad dheeri ah oo dhinac ah, iyo dhaqdhaqaaq islaami ah oo soo kordhaya oo ku baaqaya tarjumaanka "nadiif" (yacni muxaafid badan) Quraanka iyo islaamka dhinaca kale, waa qodob weyn ka ah siyaasada gudaha.
Saliidu waa udub dhexaadka dhaqaalaha Qatar; waxay ku xisaabtami jirtay in ka badan 30% ee GDP, qiyaastii 80% dakhliga soo gala dhoofinta iyo 58% dakhliga dowladda. Kaydka saliida ee la xaqiijiyey oo ah 15 bilyan oo foosto waa inuu hubiyaa sii wadida soosaarida heerarka hadda jira ugu yaraan 20 sano ee soo socota. Saliida iyo gaaska waxay siisay Qatar dakhliga ugu badan ee qofkiiba soo saaro daraasadaha badankood. Kaydka la xaqiijiyay ee Qatar ee gaaska dabiiciga ayaa ka badan 7 tiriliyan million, in ka badan 11% wadarta guud ee adduunka, taasoo ka dhigaysa keydka saddexaad ee ugu weyn adduunka. Soo saarista iyo dhoofinta gaaska dabiiciga ayaa sii kordhaya muhiimad weyn. Qatar waxay maamushaa inay soo daabacdo waxyaabo dheeri ah oo aad u sarreeya sanad walba, waxayna ka baxsatay Dhibaatada Dhaqaale ee Caalamka oo aan bad qabin.
Ka sokow qaybta tamarta, Qatar waxay kaloo dhoofisaa batroolka, sibidhka iyo birta. Doha waxay leedahay waax maaliyadeed oo si xawli ah u sii kordheysa taas oo lafteeda ka dhigaysa mid ka mid ah Xarumaha Ganacsiga iyo Maaliyadda ee Bariga Dhexe dhexdeeda. Dowladda Qatar ayaa sidoo kale soo bandhigtay qorshaheeda ku aaddan kor u qaadista ganacsiga dalxiiska iyo warbaahinta ee gacanka, iyada oo abuuri doonta waaxyo cusub si ay u sii kordhiso sumcadda Qatar. Intaa waxaa dheer, jaamacado badan oo ajnabi ah ayaa Qadar ka samaystay saldhigyo, iyaga oo Qatar u beddelay mid ka mid ah xarumaha waxbarashada ee Bariga Dhexe.
Cimilada Qatar waxaa lagu tilmaami karaa mid qalalan oo aan la cafin karin. Xilliga kuleylaha, oo soconaya bisha Maajo illaa Sebtember, maalmaha waxaa lagu gartaa kuleyl daran oo qoyan, celcelis ahaan 35 ° C laakiin aan la ogeyn inay ugu sarreyso 50 ° C. Xilliga jiilaalka, Oktoobar ilaa Abriil, maalmuhu waa kuwo aad loo adkeysan karo oo qiyaastii ah 20-25 ° C, oo leh fiidnimo qabow fiican illaa illaa 15 ° C. Haddii kuleylka laga fogaado, bilaha ugu wanaagsan ee la booqdo waxay noqon karaan Disembar iyo Janaayo.
Roobab iyo duufaanno ka socda Qatar waa kuwo aad dhif u ah, taas oo ku qasbeysa dadka deegaanka in ay biyo ka soo saaraan dhirta macaan ee dhowaan la dhisay. Si kastaba ha noqotee, duufaanno waawayn oo baaxad weyn ku leh Jasiiradda Kuwani waxay noqon karaan kuwo khatar ah haddii aan hooyga la hoos dhigin, waxayna u dhaadhacayaan dalka mugdi maadaama uu tirtirayo qorraxda kulul ee kor ku xusan. Waxa kale oo jiri kara carqaladeyn xagga gaadiidka iyo adeegyada kale ah.
Allen J. Fromherz, Qatar: Taariikh Casri ah.
Cabdul Casiis Al Maxamuud, Corsair-ka. Riwaayaddii ugu horreysay ee ku saabsan burcad-badeedkii qarnigii 19-aad ee Gacanka Beershiya, iyo buuggii ugu horreeyay ee uu qoro reer Qatar.
Sophia Al-Maria, Gabadha Dhulka ku dhacday: Xusuus. Waxaa qoray nin reer Qatar ah oo Mareykan ah oo fadhigiisu yahay Doha, tani waa sheeko madadaalo leh oo ku saabsan caruurnimadii lagu qaatay isku dayga in la soo afjaro kala qeybsanaanta Baadiyaha iyo dhaqanka Mareykanka
Siyaasadda fiisaha ee Qatar
Muwaadiniinta Baxrayn, Kuweyt, Cumaan, Sacuudi Carabiya iyo Isutagga Imaaraatka Carabta uma baahna fiiso ay ku booqdaan Qatar, waxayna isticmaali karaan Kaararka Aqoonsiga Qaranka si ay u soo galaan dalka.
Muwaadiniinta dhammaan waddamada Midowga Yurub (marka laga reebo Ireland iyo Boqortooyada Ingiriiska), oo lagu daray Bahamas, Iceland, Liechtenstein, Malaysia, Norway, Seychelles, Switzerland iyo Turkiga waxaa la siiyaa fiiso badan oo soo-galid ah oo bilaash ah markay yimaadaan, haddii ay ka yimaadaan Hamad International Gegada diyaaradaha, waxay leeyihiin baasaboor ansax ah oo ugu yaraan shaqeynaya lix bilood iyo xaqiijin hore ama tigidh soo laabasho ah. Ka-dhaafitaanka Visa-ha waxay shaqeynayaan 180 maalmood laga bilaabo taariikhda la bixiyay, waxayna xaq u siinayaan qofka haysta inuu ku qaato illaa 90 maalmood oo xiriir ah Qatar.
Muwaadiniinta Andorra, Argentina, Australia, Azerbaijan, Belarus, Bolivia, Brazil, Brunei, Canada, Chile, China (PRC), Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Georgia (disambiguation), Guyana, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Japan, Kazakhstan, Lebanon, the Maldives, Mexico, Moldova, Monaco, New Zealand, North Macedonia, Panama, Paraguay, Peru, Russia, San Marino, Singapore, South Africa, South Korea, Suriname, Thailand, Ukraine, United Kingdom , United States of America, Uruguay, Rome / Vatican iyo Venezuela waxay heli karaan ka dhaafitaan fiiso markay yimaadaan garoonka diyaaradaha ee Hamad oo ansax ah 30 maalmood laga bilaabo taariikhda la soo saaray. Tanaasuliddan waxaa lagu kordhin karaa 30 maalmood oo dheeri ah.
Muwaadiniinta Macau, Mauritius, Montenegro iyo Taiwan waxay heli karaan fiiso markay yimaadaan ugu badnaan 30 maalmood.
Muwaadiniinta Pakistan waxay heli karaan fiiso markay yimaadaan oo ansax ah 30 maalmood, haddii ay haystaan ​​baasaboor shaqeynaya 6 bilood, QR5000 oo lacag ah ama kaar weyn oo deyn ah, iyo tigidh soo laabasho oo la xaqiijiyay.
Muwaadiniinta Iran ee u socdaalaya ganacsiga waxay heli karaan fiiso markay yimaadaan qiimaha QR100 ugu badnaan joogista 6 maalmood, waa haddii ay haystaan ​​QR5000 oo lacag ah ama kaarka weyn ee deynta, tigidhka soo celinta, boos celinta hoteelka fasalka sare iyo casuumaad shirkadeed taas oo ay cadeysay Dowlada.
Muwaadiniinta dhammaan jinsiyadaha haysta ruqsadaha degenaanshaha ama fiisooyinka midkood Boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka, Kanada, Australia, New Zealand, Aagga Schengen, ama waddamada Golaha Iskaashiga Khaliijku waxay heli karaan Ruqsad Safar Elektaroonik ah oo shaqeyneysa illaa 30 maalmood. Fiisaha waxaa lagu kordhin karaa khadka tooska ah 30 maalmood oo dheeri ah.
Iyadoo aan loo eegin jinsiyada, safrayaasha socdaalka ku maraya garoonka Caalamiga ah ee Hamad uma baahna fiiso haddii ay ka baxaan 24 saac gudahood oo ay ku sii nagaadaan garoonka diyaaradaha. Fiisooyinka transit-ka ee bilaashka ah, oo shaqeynaya illaa 96 saacadood (4 maalmood) oo u oggolaanaya dadka safarka ah inay si kooban u booqdaan Qatar, ayaa sidoo kale la siiyaa dhammaan rakaabka jinsiyad kasta oo ka sii gudbeysa garoonka diyaaradaha ee Hamad, haddii ay la safraan Qatar Airways.
Kuwa u baahan fiisooyinka, fiisooyinka dalxiis waxaa laga heli karaa khadka tooska ah ee loo maro nidaamka eVisa. Fiisooyinka waxaa la soo saaraa afar maalmood oo shaqo gudahood haddii dhammaan dukumintiyada la soo gudbiyo, waxayna ansax yihiin muddada joogitaanka illaa 30 maalmood ee Qatar.
Codsiyada kale ee fiisaha, habraacyada fiisada way adkaan karaan, maxaa yeelay waxaad u baahan doontaa dammaanad dhanka Qatar ah, shirkad ama hay'ad dawladeed. Sidoo kale safaaradaha Qatar, oo ka duwan kuwa wadamada kale badankood, xaq uma laha inay soo saaraan fiisooyin, marka qof Qatar jooga ayaa ku qasbanaan doona inuu kuu xareysto dalabka. Huteelada 4/5-xiddigood waxay bixiyaan adeeg buuxa oo fiiso ah, qiimo ahaan, haddii aad qol la dhigato iyaga inta ay joogaan. Qatar Airways ayaa kuu diyaarin karta hoteelka iyo fiisada, tel. +974 44496980 haddii aad horay ula soo xiriirto (ogeysiis 7-maalmood ah ayaa u muuqda mid loo baahan yahay). Xaaladdan oo kale, waxay sidoo kale u muuqataa inay sidoo kale jirto sharci cusub oo jira (2008) si loo soo bandhigo kaarka amaahda ama QR5000 barta laga soo galo - taas oo guud ahaan waa inaysan noqon wax dhibaato ah, haddii aad awoodi karto qolka. Markaad la ballansaneyso hudheelada kale, waxaad u baahan doontaa dammaanad qaad Qatar.
Joogitaano dheeri ah, fiisooyinka waa in laguu hagaajiyaa iyadoo la haysto kafaala. Haweenka aan guursan ee da'doodu ka yar tahay 35 sano waxay ku adkaan doontaa inay soo iibsadaan fiiso joogitaan dheer ah, maadaama dalku u muuqdo inuu ka baqayo in aan la damaanad qaadi karin ammaankooda iyo jiritaankooda.
Qatar waxay ka mid tahay dowladaha Khaliijka ee sida rasmiga ah u aqbalay baasaboorrada Israa’iil (oo ay ku jiraan fiisooyinka lagama maarmaanka ah) iyo baasaboorrada oo ay ku jiraan caddaynta booqashada Israel.
Gelitaanka diyaaradda ee Qatar ayaa kor u kacday tobankii sano ee la soo dhaafay. Inta badan dadka booqanaya dalka waxay ku soo galayaan khadka Madaarka Caalamiga ah ee Hamad () meel u dhow Doha. Calanka dawladdu wadato Qatar Airways waxay xaqiijisay isku-xir ballaaran oo duulimaadyo ah oo ka howlgala xarunteeda magaalada Doha illaa 124 duulimaad. Xaqiiqdii, waa mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee adduunka oo leh adeegyo aan kala joogsi lahayn oo loo maro dhammaan qaaradaha la deggan yahay. Duulimaadyada kale ee waaweyn waxay sidoo kale u adeegaan garoonka diyaaradaha, oo inta badan mara marin u dhexeeya Doha iyo xaruntooda ku taal dalka saldhigga ah.
Qiimaha tagaasida ee ka baxa garoonka diyaaradaha wuxuu leeyahay qiimo jaban oo ah QR 25.
Wadada kaliya ee loo maro Qatar waa laga bilaabo / loo maro Sacuudiga. Ilaa aad dhalasho ka noqoto mid ka mid ah waddamada GCC, way adag tahay in la helo fiisaha Sacuudiga. Dalxiiska ayaa inta badan xirta ogeysiis gaagaaban oo waqti dheeri ah, fiisooyinkuna waa kuwo jahwareer badan oo qaali ah. Haddii aad qorsheyneyso inaad ka wadato Imaaraatka Carabta, Baxrayn iyo waddamada kale ee Khaliijka kuna sii jeeda Qatar oo aad u mariso Saudi Arabia, waxaad u baahan doontaa Sucuudiga fiisaha transit hore iyo dukumiinti cadeynaya safarkaaga socda. Waxaa jira qorshooyin mustaqbalka ah buundo weyn oo isku xirta Qadar iyo deriska la ah Baxrayn, in kasta oo kuwan si joogto ah loo daahiyo.
Xitaa haddii aad maamusho inaad hesho fiiso Sacuudi ah, safarka gaari laguma talinayo. Wadooyinka u dhexeeya Qatar iyo magaalooyinka / waddamada kale ee waaweyn waa kuwo liita. Haddii aad safraysid inta lagu jiro maalinta, ka taxaddar gawaarida xawaaraha ku socda iyo kuwa xamuulka. Had iyo jeer xir suunkaaga oo ha xawaareynin 50 mph (80 km / saacaddii). Safarka habeenkii wuxuu halis gelinayaa naftaada, aragti liidata iyo darawallada is-dila.
Waad ku safri kartaa Qatar adigoo ka raacaya / maraya Saudi Arabia, waxaa jira marinno basas go'an, gudaha Qatar, in kasta oo inta badan ay isticmaalaan ragga oo keliya. Si kastaba ha noqotee, caadooyinku waxay qaadan karaan ilaa 4 saacadood gaar ahaan habeenkii. Laguuma dhaqmi doono sida ugu fiican sidoo kale haddii aad u duusho Doha. Duulista qiimayaasha ayaa waxyar uun ka badan tigidhka baska.
Ma jiraan marinno gaar ah oo loo maro doomaha, laakiin waxaa jira doomo ganacsi oo xamuul ah oo Doha ka soo galaya adduunka oo dhan, sidoo kale doomo ganacsi oo yaryar oo ka imanaya Dubai iyo Iiraan.
Gaadiidka dadweynaha wuxuu ku yimaadaa Qatar saddex nooc: basaska, tagaasida iyo gawaarida xamuulka, oo dhammaantood ay leeyihiin Mowasalat (Karwa) oo ay leedahay dowladdu marka laga reebo shirkadaha limousine ee gaarka loo leeyahay.
Baska dadweynaha Karwa
Adeegga basku wuxuu bilaabmay Oktoobar 2005. Tigidhada waxaa lagu maareeyaa iyadoo la adeegsanayo Karwa Smartcard, oo ku timaadda saddex dhadhan:
Smartcard Classic - Lacagta bilowga ah ee QR30 oo leh QR20 amaah ayaa lagu daray. Qiimaha safarku wuu kala duwan yahay, qiimihiisuna waa QR2.50 safar gaaban. Waa inaad soo gasho markaad baska fuulayso, iyo inaad soo degto markaad ka degayso si aad uga fogaato ciqaabta QR30 ee hore. Waxaa laga iibsan karaa dukaamo kala duwan sida ku qoran bogga Karwa, laakiin laguma iibsan karo basaska.
Smartcard 24 Xaddidan - Khidmadda bilowga ah ee QR10 waxay u oggolaaneysaa 2 safar oo baska ah (hal safar soo noqosho) ah 24 saacadood gudahood marka ugu horreysa ee la soo galo. Waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad garaacdo, iyo ma aha tuubada-off Waxaa laga iibsan karaa baska si loogu safro Greater Doha oo keliya.
Smartcard 24 aan xad lahayn - Lacagta ugu horreysa ee QR20 waxay siineysaa isticmaalaha socdaal aan xadidneyn dhammaan Qadar 24 saacadood gudahood marka ugu horreysa ee la furayo. Mar labaad, ma jirto baahi loo qabo in la tuuro. Waxaa laga iibsan karaa baska dhexdiisa.
Tiro aad u tiro badan oo waddooyin ah ayaa iskaga gudbaya waddanka, iyada oo shabakaddu u fidsan tahay woqooyiga ilaa Al Khor, galbeedka illaa Dukhan, iyo illaa koonfurta illaa Mesaieed. Jadwalka iyo macluumaadka tikidhada waxaa lagu heli karaa adiga oo waca +974 4436 6053.
Taksi ama limousine
Wadada weyn ee ka timaada Doha ilaa Dukhan
Mowasalat oo ay dowladdu leedahay ayaa sidoo kale wada taksi iyo adeegga limousine. Tagaasida ayaa si fudud loo arki karaa sababo la xiriira midabkooda buluuga ah ee khafiifka ah oo leh maroon dusha sare. Qiimaha ugu horreeya ee mitirka waa QR 4, oo leh QR 1.20 dheeraad ah kiiloomitir oo u dhexeeya Dooxa iyo QR 1.80 meel kasta oo ka baxsan caasimadda. Safar aad ku tageyso ama ka soo dageyso garoonka diyaaradaha waxay leedahay hal tarifo oo ah QR 25. Si loo hubiyo inaadan lagu khiyaanayn, taxaddarrada qaarkood waa in la ogaadaa
Safarada Doxa gudaheeda tacriifta waa in loo dejiyaa '1', kuwa habeenki ama kuwa ka baxsan Doha waa in loo dhigaa '0'.
Hubi in mitirka aan la farogalin; calaamadaha mitirka la faro-geliyey waxaa ka mid ah cajalad iyo xaashiyo warqad ah oo hareeraha ka baxsan.
Sharci ahaan, haddii dirawalku diido inuu isticmaalo mitirka, raacitaanku waa inuu ahaadaa mid bilaash ah.
Waxaa jira warbixino mararka qaar ku saabsan darawalo aan amar ku taagleyn oo albaabada tagaasida xira ama diida in la furo jirida ilaa laga bixiyo lacag dheeri ah. Haddii dhacdo noocan oo kale ah ay kugu dhacdo, isku day inaad ka baxdo gaariga. Haddii aysan suurta gal ahayn, wicitaanka booliska ee 999 waa inuu u horseedaa darawalku inuu noqdo mid wada shaqeyn badan leh.
Baahida loo qabo tagaasida ayaa ka badatay keenista waqtiga sugitaankuna aad buu u kala duwanaan karaa. Isku dayga inaad mid hesho inta lagu jiro saacadaha shaqada subaxnimadu waxay u baahan tahay ugu yaraan 24 saac ogeysiis, inkasta oo xitaa ficil ahaan tani ay tahay mid aan la isku halleyn karin, maadaama tagaasida la qorsheeyay inta badan aysan imaan. Waqtiyada kale, waxay qaadan kartaa 90 daqiiqo ama kabadan si aad uhesho tagsi wicitaan ah, iyo ku bogaadinta wadada waxay noqon kartaa wax aan macquul aheyn inta badan. Meelaha kaliya ee lagugu balan qaadayo inaad taksi ka hesho waa suuqyada waaweyn, garoonka diyaaradaha iyo hoteelada caalamiga ah.
Tagaasida waa la xajisan karaa waana la wici karaa iyadoo la wacayo +974 4458 8888.
Beddelka tagaasida iyo basaska ayaa noqon doona adeegsiga adeegga limousine-ka, kaas oo u diri doona baabuur limo aan calaamadeysneyn goobtaada. Way qaali yihiin, laakiin tagaasida raaxada leh ee khidmadda bilowga ah ee QR 20, laakiin had iyo jeer ha soo bandhigin mitir.
Adeegyada caalamiga ah ee limousine, sida Uber, Careem, iyo Lyft ayaa laga heli karaa Qatar. Barnaamijyadu waxay u oggolaanayaan wicitaan deg deg ah oo fudud oo darawal ah.
Mararka qaarkood, darawal maxalli ah ayaa laga yaabaa inuu ku siiyo wiish haddii ay arkaan adiga oo ku sugaya dhinaca wadada. Waa caado in la bixiyo xoogaa lacag ah dhamaadka, inkasta oo badanaa ay diidi doonaan inay qaataan. Darawal bixiya wiish ayaa hoos u dhigaya isla markaana kugu iftiiminaya nalka hore ee guriga; waxaa loogu yeeri karaa iyadoo mowjad laga jawaabayo. In kasta oo dhaqanku badbaado yahay, haddana talo kuma aha dumarka keligood ah.
Waxaad kiraysan kartaa baabuur shirkado kiro oo baabuur oo maxalli ah. Qaar badan oo iyaga ka mid ah waxay ku yaalliin agagaarka garoonka diyaaradaha iyo Xarunta Magaalada Doha, ama haddii kale weydii hoteelkaaga talo.
Carabi waa luuqada rasmiga ah ee Qatar inkasta oo inta badan dadka degan aysan ku hadlin. Shaqaalaha qurba-joogta ah ee ka soo jeeda qaaradaha Hindiya iyo Filibiin ayaa aad uga badan dadka u dhashay Qatar, gaar ahaan magaalada Doha (halkaasoo tirada ajaaniibta ay ku dhowdahay 90%), in badan oo ka mid ah aqoontoodu aad ayey u yar tahay Carabiga. Ingiriisigu wuxuu u adeegaa sida luuqadda Faransiiska, dadka reer Qatar badankooduna waxay ku hadlaan si ay ula xiriiraan shaqaalaha ajaanibta ah ee iyaga u shaqeeya. Ingiriisigu waa luqadda labaad ee ugu caansan, inta badan dadka maxalliga ah waxay awoodi doonaan inay kuhadlaan ugu yaraan Ingiriis aasaasi ah. Dadka u dhashay Qatar, lahjadda Carabiga ee lagu hadlo waa lahjadda Khaliijka. Waxaad la kulmi kartaa shaqaale ajnabi ah oo ku hadlaya luqado kala duwan sida Buugga weedhaha Afrikaans, Buugga weedhaha Shiinaha, Buugga weedhaha Japanese, Buugga weedhaha Hindiga, Buugga weedhaha Urdu, Buugga weedhaha Filipino iyo buugga weedhaha Thai. In kasta oo aad ku heli kartid Qatar oo keliya Ingiriis hoosta suunkaaga, martigaliyayaashaada iyo dadka kale ee deegaanka ah ee aad la kulanto waxay noqon doonaan kuwo aad u cajaa'ib badan oo qaddarin mudan haddii aad akhrin karto jumlado carabi ah oo aasaasi ah.
Jasiirad yar oo is barbardhigi karta Bariga Dhexe, wax badan ayaa laga arki karaa Qatar.
Sawir gacmeedyo lagu xardhay Al-Jassassiya
Taariikh-doonka ayaan ku hungoobi doonin, noocyo kala duwan oo burbur ah, farshaxanno godad iyo matxafyo si maskaxdu u warwareegto. Tan ugu caansan waa goobta qadiimiga ah ee Al Shamal, halkaas oo ay ku yaalliin hadhaagii wixii mar ahaan jiray magaalo deked leh. Hore Qarnigii 20aad goobta weli waxay u taagan tahay matxaf, markhaati u ah waayihii la soo dhaafay. Al-Jassassiya dhagaxyada dhagaxa weyn waqooyiga-bari ee Qatar waa goob cajaa'ib leh oo ka kooban 900 petroglyphs oo la rumaysan yahay inay ku abtirsadaan qabaa'ilkii hore ee deganaa Jasiiradda intii lagu jiray qarnigii 15aad ee BCE.
Tiro qalcado ah iyo munaarado ayaa ka jira dalka; badankoodna sidoo kale waxaa loo soo celiyey matxafyo. Ku Barzan Towers istaagaan cidhifka magaalada Ummu Salal Maxamed, oo loo dhisay si loo ilaaliyo togga biyaha roobka ee dalka. Daar kale oo difaac ah ayaa ku taal Al Khor. Kuwa caanka ah Al Koot Fort waxay ku taalaa wadnaha caasimada Doha, oo ay ku dhex jiraan farsamooyin farshaxan dhaqameed kala duwan. Dhismayaasha kale waxaa ka mid ah Marwab Fort, Al Thughab Fort, Al Shaghab Fort, Al Rakiyat Fort, Al Wajbah Fort iyo burburka Al Yussoufiya Fort, Umm Al Maa Fort iyo Al Ghuwair Castle.
In kasta oo Matxafka Qaranka loo xiray dayactirka, waxaa jira tiro matxafyo kale oo dalka ku baahsan oo ku takhasusay taariikhda. Ku Matxafka Sheekh Faysal Bin Qassim Al Thani Al Shahaniyah waxaa ku yaal Shiikha aruurinta waxyaabaha soo jireenka ah, farshaxanka iyo farshaxanka laga soo qaatay Qatar, Bariga Dhexe iyo adduunka oo dhan.
Soojiidashada casriga ah
Yachts ayaa ku soo xirtay Luul
Matxafka Farshaxanka Islaamka, Doha
Souq Waqif: waa suuqii hore ee dhaqameed ee Qadar. Waxay leedahay maqaayado badan oo wanaagsan, gaar ahaan xilliga habeenkii. Sidoo kale iibiya alaabooyin badan oo qaran - gorgortan ayaa lagula talinayaa.
Luulku: waa jasiirad dad samaysteen oo ku tiirsan Doha buundo. Waxaad ka heli kartaa makhaayado iyo dukaanno kaladuwan oo kaladuwan, inta badanna kuwa ugu sarreeya.
Villaggio Mall: waa suuq weyn oo laga dukaameysto oo ku yaal Qaaradda Venetian kanaal iyo gondolas sidoo kale. Dukaamo aad u tiro badan oo kala jaad jaad ah ilaa raaxo.
Mathaf: Matxafka Carbeed ee farshaxanka casriga ah
Katara: Tuulo dhaqameed ay hoy u yihiin maqaayado badan oo caalami ah iyo kuwa carbeed, xeeb qurux badan, ayna ku jiraan dhacdooyin dhaqameed badan. Dhab ahaantii waa meel la arko.
Aqua park: Aaladda Biyaha.
Qatar Mall: Cunto aad u weyn oo leh dukaanno kala duwan, maqaayado, iyo madadaalo.
Beerta Aspire: Beerta quruxda badan ee ku ag taal Villaggio mall, waxaa loogu talagalay qoysaska kaliya dhammaadka usbuuca, booqashada bilaha jiilaalka ayaa lagula talinayaa.
Xadiiqadda MIA: Waa jardiin qurux badan oo ku xigta madxafka fanka Islaamka, dadka kelidood ah waa loo oggol yahay, booqashada bilaha jiilaalka ayaa lagula talinayaa.
Si qurux badan loo soo celiyey Souq Waqif ee Doha.
Lacagta dalka waa tan Riyaal Qatari, oo lagu muujiyey astaanta “رق"Ama"QR”(Lambarka ISO: Qar). Riyaalka waxaa lagu dhajiyay doolarka Mareykanka qiimaha QR3.64 ilaa US $ 1. Hal riyaal waxaa loo qaybiyaa 100 dirham, oo leh 1, 5, 10, 25 iyo 50 dirham oo madaahiib ah. Riyal waxaa lagu heli karaa 1, 5, 10, 50, 100 iyo 500 madaahibta lacagta lagu qoro.
Waa wax si toos ah u toosan in laga beddelo lacagaha waaweyn ee adduunka ee ka dhex jira Qatar, oo ay weheliyaan lacagaha Bahrain, Saudia Arabia iyo UAE. Qiimayaashu si siman ayey isugu egyihiin bangiyada iyo kuwa wax badala, iyada oo ay jiraan isku-duwayaal badan oo sariflayaal ah oo u dhow Dahabka Souq ee Doha. Bangiyadu waxay ku badan yihiin guud ahaan magaalada Doha, iyagoo laamo ku leh magaalooyinka waaweyn sidoo kale. Jeegaga socotada waxaa aqbala bangiyada waaweyn.
Ka adeegashada Qadar
Qadar waxay leedahay xarumo ganacsi oo badan oo ay ka mid yihiin H&M, Zara, iyo Mango. Xarumaha ugu waa weyn waa Mall of Qatar, Festival City, iyo City Center. Bariga Dhexe iyo noocyada maxalliga ah ayaa sidoo kale jira
Luulku wuxuu leeyahay sumado raaxo leh oo adduunka oo dhan ka socda. Waa meesha ugu qiimaha badan ee wax lagu iibsado ee Qadar.
Blue Salon waxay leedahay iib weyn oo laba jeer sanadkii ah halkaasoo aad ka soo qaadan karto Armani, Valentino iyo Cerutti oo ku habboon qiimaha nuska. Waxaa jira waxyaabo badan oo laga iibsado halkan laakiin ka digtoonow luul jaban oo leh suurtogalnimo sare oo been abuur ah. Dawaaryahano badan oo xirfadlayaal ah oo jooga Qadar waxay ka dhigayaan meel wanaagsan oo laga helo dhar laga dhigay-ku habboon.
Souqyada ku yaal Xarunta Doha sidoo kale waxay leeyihiin wax badan oo ay soo bandhigaan, in kasta oo badeecaduhu inta badan ka tayo jaban yihiin kuwa suuqyada. Qiimayaashu badanaa waa gorgortan, markaa ku tababar xirfadahaaga gorgortanka. Souq Waqif (The Souk Souk) waa kan ugu xiisaha badan souqyada; waa la dayactiray si uu u ekaado sidii 50 ama 60 sano ka hor. Waxaad ka iibsan kartaa wax kasta cimaamad ilaa dheri weyn oo aad ku karsan karto geel dhallaanka ah!
Waxqabad weyn oo loogu talagalay dalxiisayaasha ayaa ah inay la kulmaan dhaqanka umada. Qaab-nololeedka Qadar ee soo jireenka ahaa wuxuu ahaa mid fudud: Reer guuraaga reer baadiyaha ah ee geela ku wareegaaya lamadegaanka, iyo kalluumeysatada oo dabaqa badda ka baaraya luul si ay uga ganacsadaan. In kasta oo labadan qaab nololeed ay intoodii badnayd ku baaba'een jasiiradda, haddana dawladdu waxay qaadday tallaabooyin ay ku ilaalineyso dhaqankooda si jiilalka soo socda ay ula kulmaan.
Shirkado badan oo dalxiis ayaa shaqeeya safarada lamadegaanka labada afarta geesood iyo geela. Qaarkood waxaa laga yaabaa inay maalinta uun noqdaan, halka kuwa kale ay tagi karaan illaa hal usbuuc oo ay ku lugeeyaan dad lugeynaya oo ku hoyda habeenkii teendhada Bedouin. Booqashooyinka hal maalin ee "dune-bashing" ayaa si fudud ugu lug leh xawaareynta dhulka cidlada ah ee aan dhammaadka lahayn ee Landcruiser.
The luul dhaqanku wuxuu jiray ilaa 2000 BCE, markii diiwaanka Mesobotamiyaanka laga hadlayo dhalaalka "indhaha kalluunka" ee laga keenay gobolka Gacanka. In kasta oo warshaduhu ay kacsanaayeen ka dib markii la helay shidaal, haddana sannad kasta waxaa la sameeyaa xaflad ballaadhan oo lagu xuso dhaqanka. Ku Bandhigga Badda ee Qatar Doha inta badan waxaa ku jira safar balaaran oo badda ah oo ay soo saaraan dad kala duwan doon doonyo si ay uga helaan sariiraha lohod-ka ee sagxadda badda. Waxqabadyada kale ee xafladda ka socda waxaa ka mid ah bandhig muusig, bandhig shaabad, sahamis dhoobada ciidda iyo biyo, iftiin iyo cod.
Shirkado badan ayaa bixiya quusin doonta dalxiisayaasha, kuwaas oo laga abaabuli karo Doha. Meelaha caanka ah ee lagu quusto waxaa ka mid ah Old-Club Reef-ka loo yaqaan 'Man Club Reef' iyo 'New Club Reef' oo ka baxsan Mesaieed, Qapco Reef, MO Shipwreck iyo Al Sharque Shipwreck.
Kale oo caan ah biyaha waxaa ka mid ah fallaadh-fuulista, wadista skis-skis, fuulitaanka iyo safarro kalluumeysi oo kiraysan.
Machboos-ka qaranka ayaa ka kooban bariis hilib leh (saxan digaagan), basasha iyo dhir udgoon
Qatar waxay u muuqataa ikhtiyaarro aan dhammaad lahayn oo xagga cuntada ah, in badan oo ka mid ahina waa heer sare. Haddii aad jeclaan lahayd cunnada yurubiyanka ah ee qurxoon, booqo hudheel sida Ramada ama Marriott, oo labaduba bixiya sushi aad u fiican iyo xulashada cabitaanka khamriga leh cuntadaada (makhaayadaha kaliya ee magaalada ku yaal ee tan sameyn kara ayaa ku jira hoteelada waaweyn), laakiin qiimo jaban. Cunto dhab ah oo dhadhan fiican leh oo Hindi iyo Baakistaan ​​ah ayaa laga helaa magaalada oo dhan, laga bilaabo meelaha u janjeedha qoysaska illaa cunno aad u aasaasi ah oo loogu talagalay shaqaalaha Hindida iyo Baakistaan. Waxaad ku soo jiidan kartaa xoogaa xiiso leh oo ku saabsan maqaayadaha shaqaalaha, laakiin maamulka ayaa had iyo jeer noqon doona mid aad loo soo dhoweeyo, cuntaduna waa mid aad qaali u ah.
Cunnada Bariga Dhexe meel walba waa sidoo kale, qaabab badan-kebab, rooti, ​​hummus, liistadu way sii socotaa. Waxaa laga iibsan karaa qiimo jaban meesha laga soo qaado (qaar badan oo u muuqda kuwo aan fiicneyn, laakiin u adeega cunno cabsi leh) ama laga helo meel qurux badan, sida Layali cajiibka ah (oo u dhow Chili ee 'Cholesterol Corner' aagga) oo u adeegta reer Lubnaan. cuntada oo leh hookahyo tubaako dhadhan leh. Cunnooyinka Persian-ka ee la sifeeyay ayaa loogu heli karaa qiimo macquul ah makhaayada Ras-Nasa`a ee boqortooyada loo magacaabay ee ku taal Corniche (ha moogaanin qolalka nasashada ee sida cathedral-ka ah). Cunto dhaqameedka Qatar waa, si kastaba ha noqotee, si la yaab leh ayay u adag tahay in laga helo maqaayadaha, waxayna inta badan ku kooban yihiin guryaha dadka deegaanka. Maaddaama dadka reer Qatar ay leeyihiin dhaqan soo dhaweyn leh, haddii aad leedahay saaxiibbo reer Qatar ah, in lagugu marti qaado guryahooda guud ahaan waa fursadda ugu wanaagsan ee aad ku baari karto cunnada maxalliga ah.
Ha ka baqin inaad ku dhiirrigeliso suugaanta cuntada raadineysa; waxay noqon doontaa waayo-aragnimo gaar ah oo ku saabsan goob sax ah, in kasta oo meelaha qaarkood ee aad arkaysaa ay u muuqan karaan kuwo kacsan, taasi waa aagga guud ahaan, cuntaduna waxay u badnaan doontaa inay aad u fiicnaan doonto. In badan oo ka mid ah maqaayadaha ku yaal sooksyada (iyo sidoo kale dukaamada) ayaa la xidhaa inta lagu jiro saacadaha galabtii. Haddii aad ku jirto xaalad qosol leh, waxaad isku dayi kartaa rooti McArabia-McDonald's Bariga Dhexe oo laga heli karo oo keliya gobolka.
eHalal Safarka Mart > Safarka Qatar Xalaal
Hagaha Socdaalka Mainz Halal